M/weyne Farmaajo oo soo saaray war ka dhan ah 14-ka senator uu u saxiixay gobolka Banaadir.
January 31, 2021 Xuseen 5
Puntlandtimes (Muqdisho)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iclaamiyey qodobada looga arrinsan doono shirka madaxda dowlad Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ku dhexmari doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.
Farmaajo ayaa shaaciyey in shirka Dhuusamareeb looga arrinsan doono qodobadii ka soo baxay shirkii September 2020, kaasi oo uusan ku jirin wax ku aadan meeqaamka gobolka Banaadir iyo 14-ka xildhibaan ee uu saxiixay inay ku matalaan aqalka sare ee Soomaaliya.
“Shirka wadatashiga ee Madaxweynuhu isugu yeerayo Madaxda Dowlad Goboleedyada, waxaa saldhig u ah heshiiskii 17-ka September 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka, ayna meelmariyeen labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya”
Qodobkaan wuxuu soo koobay waxyaabaha shirka ka dhici doona magaalada Samareeb looga hadlaayo, waxaana saldhigga shirka wadatashiga ah lagu sheegay heshiiskii 17-ka September ay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ku gaareen Muqdisho.
Kkkkk…odayga Kaahiye si fiican baad ula hadashay. Ninkaan horaan u arkay oo waa nin caadifaysan. Waxaan u maleynayaa waa qolada akhrisay ee rumeysatay buugaagtii uu qoray ninkii dhintay reer C/Qaadir-oromo oo isku dayey inuu tolkiis taariikh cusub u abuuro, iyo buugaagta Galaal weli qorayo.
Waxaan layaabay odayaal Xamar ku shiray oo ku doodaya in Hawiye iyo Oromo walaalo yihiin oo wada dhasheen!
Haddii Ajuuraan Hawiye yahay muxuu awood-qaybsiga ugu raacay Digil & Mirifle? Waxaa la iska dhaadhiciyey maadaama odaygii Daarood dhulka yimid in dadkii uu waagaas ugu yimid oo dhan ahaayeen isku isir.
Dadka dhulka Soomaalida degganaan jirey waxaa ka mid ah dad la oran jirey Tiirriyaad oo ah dadka ka tegay qabuuraha taallo-tiirriyaadka ee sida ahraamta Masaarida ah dhagxaan la isdulsaaray. Soomaalidu waxay yiraahdaan geela waxaa laga dhaxlay Tiirriyaad. Sugaanta Soomaalida waxaa ku jira heeso ka hadlaya Tiirriyaad.
Tiirriyaad iyo Ajuuraan waa qowmiyado Kushitik oo qadiim ah kana facweyn Dir, Daarood, iyo Hawiye.
Farmaajo markii uu tallaabo hore u qaado, labo ayuu gadaal u qaadaa. Wixii uu gacanta midig ku bixiyo, tan bidix buu kusoo ceshadaa. Haddii Reer Puntland iyo Jubbaland ay mar kale aaminaan ninkaan beesha caalamku jajuubtay, mar kale ayey dagmi doonaan.
Ajende kale ayuu wataa waana sababta uu u yiri shirku wuxuu ku koobnaan doonaa heshiiskii Sept 2020. Wuxuu doonayaa intuu Baarlamaanka waqtigiisii dhacay kulmiyo oo laaluusho si ay u meelmariyaan inay dastuurka wax ka beddelaan si loo xalaaleeyo 13kii kursi ee Xamar, iyo ugu dambeyn inuu waqti ku darsado.
Aniga waxay ila tahay in qodobka ugu weyn ee loo baahan yahay in Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradku ka hadlaan yahay inay diidaan in Baarlamaanku shiro sababtoo waqtigiisii waa dhammaaday. Haddii xitaa ay aqbalaan in Baarlamaanku shiro waa inay shardi uga dhigaan inuusan ka doodi karin isla markaana meelmarin karin arrimo masiiri ah.
Wax kasta oo Dhuusamareeb kasoo baxa waxaa harayn doona ciyaarta iyo khiyaanada cusub ee Farmaajo iyo lataliyeyaashiisu lasoo bixi doonaan. Waxaan rajeynayaa in Puntland iyo Jubbaland barteen casharro ku filan.
Munaafaqdda waa wax xun” Hypocrisy ” waa been abuur waxa aad baraha Bulshada ku soo qoreysaan waa dacaayad Raqiis ah,aan sal iyo raad laheyn 13 Senator ee Gobolka Banaadir waa sidii uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u saxiixay.
Waana arrin sharciyan dhagan gashay 100%.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansaxiyey,Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa saxiixay.
Arrinta 13 Senator ee la siiyey Gobolka Banaadir matalaadiisa inuu ku yeesho Baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan Aqalka sare.
Waxaa hadda u harsan waa sidii loo soo magacabi lahaa iyo sidii Beelaha Soomaalida loogu qaybin lahaa, waayo maadaama hadda aysan jirin Doorasho Toos ah oo dadka Soomaaliyeed codkooda dhiibaneynin.
Adigaa mukhlis ah oo wax walbana og. Tirada Aqalka sare in wax laga beddelo waxay u baahan tahay in dastuurka wax laga beddelo, taas oo u baahan 2/3 cod oggolaasho ee baarlamaanka.
Xamar inta aan kuraas la siin waxaa horreeya in laga heshiiyo nooca maqaamkeedu noqonayo. Xamar iyo waxa dhexyaal waad boobi kartaa oo bililiqaysan kartaa laakiin sharciga iyo dastuurka ma bililiqaysan kartid. Haddii aad afduubtana meel ku gaarimaysid. Haddii mar kale la kala-irdhoobana, cid kaaga futo xun majirto — ama guulwade Farmaajo taageersan ahow ama mooryaan reer Galmudug ah ahow.
@ A.Arar waa nin wax badan og fahansan dowladnimaduba inay tahay ilaalinta iyo ku dhaqanka shuruucda la qortay lana ixtiraamo, hadii qodob dastuuri ah la badelayo waa in sharci lagu bedelaa ee aysan noqon lajiifiyaana banaan. Anigu waxaan qabaa dhibaatada ugu wayn ee dalkan soomaaliya u sal dhigan layahay inay tahay ku tumasho qaanuunkii dalka u yaalay iyo fahan xumada madaxda soomaaliyeed cawaaqib xumada ka dhalan karta ku tumasho qaanuun. Qaanuunku waa kala haga wax walba waa kan kala xadeeya hay adaha dowlada heerarkooda waa kan bulshada lagu ilaaliyo. Waxaa nasiibdaro in ilaaliyihii qaanuunka dalka ee ah Madaxwaynaha Qaranku uu maalin walba kufasano kana sinaysanayo wixii ugu waynaa ee lagu aaminayay kitaabkana gacanta u saaray isagoo leh WAXAAN KU DHAARABAYAA INAAN DHOWRO SHARUUCDA DALKA UTAAL tolow madaxwaynuhu waxa ayuu gacanta saaray miyuusan ahayn kitaabka quraanka ee manusalka ah mise buug buu ahaayoo waxbaa laynoo daahay. Waxaan aaminsanahay soomaaliyay qof jeclaysiga aynu ku bedelno qaran jeclaysi dalkana inagaa lehe aynu wada ilaashano sharcigana ku ilaashano, ogaada qofku qaranka maahan waa biniadam kula mid ah wuu qaldamin wuuna sixin mudo xileedna waa leeyahay ee aynu ogaano qaranimadu inaytahay qaanuunka oo la dhowro.